Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige - Daryeel caafimaadka ee dadka magangelyo doonka ah ama aan sharciga Iswiidhan haysan - 1177
Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige - somaliska
Daryeel caafimaadka ee dadka magangelyo doonka ah ama aan sharciga Iswiidhan haysan
Qofka qaangaadhka ah/weyn ee magangelyo doonka ah ayaa xaq u leh inuu helo daryeel caafimaad iyo daryeelka ilkaha ee aan sugi kareynin. Waxay taasi xitaa khuseysaa qofka Iswiidhan jooga ee bilaa sharciga ah. Qofka 18 sano jir ka yar ayaa markasta xaq u leh inuu helo daryeel caafimaad iyo daryeel ilkaha ah.
Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish.
Waxa uu daryeelka caafimaadka ee aan sugi karin tusaale ahaan noqon karaa haddii ay lug ku jabtay ay u baahan tahay in nuurad/jibis lagu xidho.
Sidee ayaan daryeel caafimaad u raadsadaa?
Haddii adiga ama qof qoyskaaga ka tirsan uu daryeel caafimaad u baahan yahay ayaad badiyaa caawimo ka heli kartaan xarun caafimaad (vårdcentral). Waxa taas sidoo kale loogu yeedhi karaa, tusaale ahaan, hälsocentral, husläkarmottagning ama familjeläkarmottagning.
Haddii aanad hubin meesha aad daryeel caafimaad ka raadsaneyso
Waxaad goor kasta soo wici kartaa 1177 haddii aanad hubin meesha aad daryeel caafimaad ka raadsaneyso. Waxaad ku hadli kartaa af Iswidish ama Ingiriisi.
Kalkaalisooyinka ka jawaabaaya ayaa xitaa kaala talin kara waxyaalaha aad adigu sameynayso si aad uga roonaato.
Macluumaad dheeraad ah ka akhriso Sidee daryeelka-cafimaad uga shaqeeyaa Iswiidhan.
Kaadhka LMA-ga ee dadka magangelyo doonka ah
Waxaad khaadh khaas ah ka helaysaa Hay’ada Socdaalka (Migrationsverket) markaad magangelyo dalbato. Waxa kaas loo yaqaanaa kaadhka LMA. Waa inaad kaadhka tusto markaad daryeel caafimaad raadsanayso.
Carruurta ayaa sidoo kale kaadhka LMA heleysa marka ay magangelyo dalbadaan.
Maxaan samaynayaa anigu hadan ka imi Yukrayn?
Hay’ada Socdaalka iska diiwaan geli haddii aad Ukraine ka soo baxsatay. Markaas ayaad heli doontaa daryeel caafimaad iyo daryeelka ilkaha oo la mid ah kan ay dadka magangelyo doonka ahi helaan.
Waxa sidoo kale laguu soo bandhigayaa baadhitaan caafimaad.
Tus kaadhka UT-ga markaad daryeel caafimaad raadsaneyso.
Khaadh khaas ah ayaad helaysaa markaad Hay’ada Socdaalka iska diiwaangaliso. Waxa kaas loo yaqaanaa kaadhka UT-ga. Waa inaad kaadhka tusto markaad daryeel caafimaad raadsanayso. Waxay taasi khuseysaa carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.
Dhammaan dadka 12 sano jir buuxiyey ayaa loo soo bandhigayaa tallaalka Covid-19.
Qofka aan ka diiwaan gashaneyn Hay’ada Socdaalka
Qofka aan ka diiwaan gashaneyn Hay’ada Socdaalka ayaa gargaarka degdega ah la siin doonaa, laakiin waxa uu u baahan yahay inuu iska bixiyo.
Waa imisa kharashka daryeelka caafimaadku?
Carruurta ilaa 18 sano jir ah ayaan inay wax bixiyaan u baahneyn. Waxay taasi khusaysaa carruurta magangelyo doonka ah ama aan sharci ku laheyn Iswiidhan. Mararka qaar ayay carruurtu u baahan karaan inay lacag ka bixiyaan rugta gargaarka degdegga ah.
Dadka waaweyni waxay bixinayaan kharashka daryeelka caafimaadka
Qofka buuxiyey 18 sano jir ayaa badiyaa bixinaaya kharashka daryeelka caafimaadka iyo daryeelka ilkaha.
Tusaale ka mid ah daryeelka caafimaadka ee lacag laga bixinaayo
Booqashada dhakhtarka ee xarunta caafimaadka (vårdcentral) ugu badnaan waa 50 karoon.
Booqashada dhakhtarka ilkuhu waa 50 karoon. Waxa uu kaasi khuseeyaa daryeelka ilkaha ee aan la sugi karin.
Dawada warqadda la iskugu qoro ayaa ugu badnaan qiimaheedu yahay 50 karoon. Laakin daawooyinka qaarkood ayaad qiime dhan bixineysaa, tusaale ahaan dawada qufaca.
Tusaale ka mid ah daryeelka caafimaadka ee aan lacag laga bixineynin
Booqashada rugta umulisada
Booqashada xarunta daryeelka carruurta (barnavårdscentral)
Baadhitaanka daryeelka caafimaadka ayaa dadka waaweyn iyo carruurta u bilaash ah
Dhammaan dadka waaweyn iyo carruurta magangelyo doonka ah ee Iswiidhan jooga ayaa baadhitaanka caafimaadka loo fidiyaa. Taasi wax kharash ah la iskama qaadaayo.
Qofka Iswiidhan sharci la'aan ku jooga ayaa baadhitaan caafimaad loo fidinayaa markuu daryeel caafimaad raadsado. Kaasi wax kharash ah kama bixinayo.
Haddii aanad af Iswiidhish ku hadlin ayaad turjumaan xaq u yeelan kartaa. Waxa turjumaanka qabanaaya xeerka sir qarinta. Waxba kama bixinaysid kaalmada turjumaanka. Daryeelka caafimaadka la xidhiidh kahor intaanad halkaas tegin si aad luqadaada caawimo ugu hesho.
Katja Öster, 1177, nationella redaktionen
Olle Olsson, maamulaha Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka, StockholmAnna Åberg, qareenka ururka, Stockholm